Din rel elektronika metatra elektronika Mpanamboatra - China Din rel elektronika angovo metatra elektronika mpamatsy, Factory
Drafitra fiaran-jiro elektrika tokana solo (mavitrika) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fanitsiana ara-teknika GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Drafitra fiaran-jiro elektrika tokana solo (lavitra) dia vokatra fandrefesana angovo elektrika vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008.Izany ity vokatra ity dia mampiasa siram-batana misy fizarana lehibe sy fizotran'ny famokarana SMT. miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso ny fotoana tena izy ary fifandraisana ifanakalozana.
Dingana tokana DIN Rail Energy Meter card karatra IC)
Drafitra fiaran-jiro elektrika tokana singa (karatra IC) dia vokatra fandrefesana angovo elektrika vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay arakaraka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008.Izany ity vokatra ity dia mampiasa siram-batana misy fizarana lehibe sy famolavolana SMT. , miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso ny fotoana tena izy, ary fifaneraserana vaovao.
Dingana tokana DIN Rail Energy Meter （dormitory）
Drafitra fiaran-tsolika vita amin'ny alàlan'ny andiany faharoa (dormitory) dia vokatra fandrefesana angovo herinaratra vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fanondroana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa faritra misy fizarana lehibe sy fizotran'ny famokarana SMT. miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso ny fotoana tena izy ary fifandraisana ifanakalozana.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (lavitra)
3 phase 4 tariby angovo herinaratra (lavitra) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008 ary ny GB / T17215.323-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.